Xa udweba abantu , kunceda ukwazi ukuba kwenzekani phantsi kwesikhumba. Awudingi ukukhumbula amagama angama-latin, ngokukhawuleza nje ukuba ukhumbule ngokucacileyo oko kuhamba kuphi-oko kubonakala ngathi.
Ubume bempumlo bubonakala bukhulu ukusuka kumntu ukuya kumntu, ngenxa yesithambo kunye nesakhiwo se-cartilage , kunye nesisu sombuso kunye nomlinganiselo weoli phantsi kwesikhumba. Kubalulekile ukugcina ngamnye umntu ngokucophelela aze afunde ukuma kwempumlo kunye nesimo salo ngokubhekiselele kwezinye iimpawu.
Ukwenza isakhiwo seNose esenziwe lula
Iimpumlo zingenziwa lula kwi-prism esemgangathweni. Oku kuya kubunjwa kunye nenqamlezo yayo kwibhulorho yepumlo, kunye nesiseko sayo ngaphaya kweyona nxalenye enkulu kunazo zonke zamaconsi, ngokubhekisele kwi-tip. Zama ukudweba lo mfanekiso olula kunye nobuso kwii-angles ezahlukeneyo. Qaphela ukuba kulo mzekelo, icala elifanelekileyo lempumlo lide kunokuba kusekho ngenxa yembono. Ukubonisa le nkathazo elula kuqala kukunceda ukuba ufunde kakuhle into ebonakalayo.
Ukubeka i-Face kwi-Face
Ukubeka impumlo ebusweni, qalisa ngokukhangela isakhiwo senhloko. Ukuqwalasela umlo wobuso, kunye nelo lwalo lwalugobileyo, apho impumlo ihlala khona. Dweba umgca ngebunzi nasemlonyeni ukubonisa imbindi ebusweni. Oku kuya kukunceda uqinisekise ukuba ezi zinto zihambelana ngokufanelekileyo.
Gwema ukucacisa nokusebenzisa indawo yokukhanya nesithunzi kunceda ukudala impembelelo emithathu. Ukusetyenziswa kwe-shading ecwangcisiweyo - apho amanqaku akho epensela alandela ifomu-anokunyusa oku. Khangela iziqulatho kunye nezithunzi. Phawula indlela kule mzobo, impumlo ijikeleze, kangangokuthi akukho mgca okhuni kunye neempumlo - umlo wayo uphakanyiswa yizinto ezigqwesileyo, kodwa udibanisa ezihlathini kwicala ngalinye.
Kulo mgca womgca, unokubona indlela umzo ojikeleziweyo okhankanywe ngayo kwisinyathelo esedlule kuphakanyiswe ukusetyenziswa komgca okhankanywe. Umgca ovela kwiphondo lempumlo uphakamisa kancane kancane uze uqalise kwakhona kwibhulorho ekhaleni, ucebise umgca ongezantsi kodwa ungabonakali. Dweba imigca yecrawy-crossour lines ukuze ubonise umlo.
Ukudweba i-Nose kwiProfayili
Xa udweba impumlo kwiprofayili, qaphela ngokucophelela uze udwebe oko ubonayo, usebenzisa ezinye iziganeko ebusweni njengamaphuzu-nkcazelo. Ngokomzekelo, i-nostri ingadibanisa nekona lempumlo, okanye i-bump kwibhuloho iya kuba yinqanaba le-lid eliphantsi - kuxhomekeke kwinqanaba lobuso kunye ne-anatomy ye-sitter yakho. Zama ukubamba ipensela phakathi kwakho kunye nomxholo wesigxina - umgca wecala ngokubhekiselele kwinqanaba ebusweni, kwaye ubone ezinye iindawo eziphezulu nangaphezulu. Qaphela ubunzulu - sondela iinxalenye zobuso ezikufuphi ngakumbi, kwaye vumela ukuba indawo ezikude zidibanise emva kwazo.
Dweba iKrismesi Holly ngePlascolor ipensela
Indlela yokudweba Indlovu yeKotyhuthi kwiZinto ezilula
I Symbolism - Iifom zeJometri
Funda indlela yokudweba i-Turtle Sea
Iqhosha leNqabileyo yeqhwa leBlue
10 Ukufudumala kweeSicwangciso seSifundo
I-Adveland Institute of Music Admissions
Abalinganiswa beCattoon babesifazana abagqwesileyo abavakaliswa ngabantu
'I-Final Destination' Series Series
"I-Alma Redemptoris Mater" Iingoma kunye neNguqulelo